ट्रम्पले अचानक किम जोङलाई किन देखाए आफु प्रयोग गर्ने गाडी : हेर्नुस ट्रम्पले प्रयोग गर्ने गाडीको अपत्यारिलो विशेषता
काठमाडौं , २९ जेठ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शिखर वार्तामा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनलाई आफ्नो लिमोजिन गाडी देखाएका थिए । दुई नेताबीच सिंगापुरको सान्तोषा आइल्याण्डमा ऐतिहासिक भेटवार्ता
युएस बंगला विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका चालकको श्रीमतीको निधन
काठमाडौं ९,चैत्र । काठमाडौंमा दुर्घटना भएको युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान चालककी पत्नीको शुक्रबार विहान मृत्यु भएको छ । विमान चालक अविद सुल्तानकी पत्नी अफ्सना खानमको बंगलादेशको राजधानी ढाकाको नेशनल इन्ष्टिच्युट
उहाँहरुले पेलेर लानुभयो भने दुई बर्षपछि त महाधिवेशन छँदैछ’ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित गगन थापा पार्टीभित्र वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न मात्र होइन, पार्टी
‘मेरो लडाइँ असल न्यायाधीशविरुद्ध होइन’: डा. केसी
काठमाडौं, २५ पुस । अदालतको अवहेलना अभियोगमा सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा थुनिएका डा. केसीसँग अन्नपुर्ण पोष्टका लागि बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानीको अंश : सर्वोच्चको आदेशलाई कसरी लिनुभएको छ ? म सर्वोच्च
तपाईं गीत किन गाउनुहुन्छ? पैसाका लागि, प्रतिष्ठाका लागि, आत्मसन्तुष्टिका लागि, के को लागि? मैले गाउन कुनै लक्ष्य बनाएर सुरु गरेको होइन। मेरा पिताजी आशागोपाल गुरुवाचार्य एक नामुद सङ्गीतकार र गायक–उस्ताद
आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा केही क्षेत्रमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमध्ये धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ पनि चर्चामा छ । उक्त क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधी र राजपाका
काठमाडौं, २५ असोज । एमाले नेता राधाकृष्ण मैनालीले भारतकै चाहना अनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति पार्टीबीच तालमेल र पार्टी एकताको घोषणा भएको
दशैंको छेक पारेर एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति पार्टीले चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नयाँ राजनीतिक ध्रुबीकरण सुरु भएको छ। प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचन परिणामपछि विकास
नापतौलमा ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही
काठमाडौं, २ साउन । नापतौलमा अनियमिमता गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्ने पूर्वाञ्चलका दुई हजार ६७५ व्यवसायी एवम् व्यापारीलाई गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालयले कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को
काठमाडौं, ४ असार । यातायात कार्यालयमा उठेको राजस्व अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ करोड रुपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा तयार गरेको छ । यातायात कार्यालय इटहरीमा भएको अनियमिततामा नायव
काठमाडौं, ४ असार । युएई स्थित नेपाली दूतावासको टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई स्वागत गरेको छ । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किने क्रममा आइतबार बिहान आबुधावीमा उहाँलाई